7 Best ukuqeqeshwa Blockchain Development
Isilimela 7, 2018 admin
Ukuthembeka ukuqalisa exchange crypto
ukuthembeka Investments, inkampani esingathi ivelela $2.5 yezigidigidi impahla zilawulwa, iceba ukuba buildout iimveliso eziya tyhala wentengiso Bitcoin ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Ngaphezu, Ukuthembeka uya ukuqasha ukwakha exchange asethi yedijithali, ngokutsho ad umsebenzi yangaphakathi. Ingabinani ufuna i DevOps inkqubo injineli “ukunceda injineli, ukudala, kwaye uyisebenzise i Digital Asset exchange zombini ilifu karhulumente kunye nawabucala.”
Ingabinani kwakhona ukusebenza ngezisombululo egadiwe crypto, ngokutsho kwenye ad umsebenzi.
Ukuba Emtshatweni uqala ngempumelelo ezi mveliso, bekuya ukumela omnye uhamba dolophu kwinkampani Wall Street kulo kwimarike-asethi digital.
Kubangel 'umdla ukwazi, CEO nesinika ngayo, Abigail Johnson, na ophakamise of Bitcoin.
Ukuba Emtshatweni wenza okuqalisa umnikelo Exchange crypto, bekuya kunjalo, kuba phakathi ngakuphi dolophu kwinkampani Wall Street enkulu kulo kwimarike lutsha crypto, abaqeshiweyo elime ngayo $350 billion.
izilingo thailand central cryptocurrency bank
Bank of Thailand i-irhuluneli Veerathai Santiprabhob kubonisiwe kwintetho wakutshanje ekuphuhliseni ibhanki central imali lwedijithali ihoseyile kungoku olusezimbizeni njengenxalenye yeenzame ebanzi eli lizwe trialing iteknoloji blockchain kumacandelo ahlukeneyo.
le projekthi, ogama Inthanon, ukwabelana igama intaba nende Thailand i-, ufuna ukwenza eyakho cryptocurrency ezisekelwe blockchain ibhanki ukuba wenze zombini transactions zizodwa ngokukhawuleza yaye kungabinandleko.
Uthe kule ntetho:
“Le nzame kufuneka siyakuvula indlela transaction ngokukhawuleza yaye kungabinandleko nokungqinisisa ngenxa amalinge ngaphantsi ezifunekayo xa kuthelekiswa iinkqubo yangoku.”
Northern Trust iifayile patent for ukugcina imizuzu yentlanganiso kwi blockchain
Iinkonzo zemali beqinile Northern Trust iphumelele igunya usekele iirekhodi yeentlanganiso usebenzisa ngobuchwepheshe blockchain.
Indlela isebenzisa uthotho izivumelwano smart ukufaka idatha enxulumene intlanganiso, kubandakanywa iingxelo ngubani ukuya (evela izixhobo ukuze bawuthwale), xa intlanganiso yaso yabanjwa kanye apho.
Northern Trust hones kwi kwityala ukusetyenziswa ethile kakhulu, idatha yomcimbi, yaye ithetha ukuba intsingiselo siqinise ngayo ngokubanzi yokuqokelela idatha zokusebenza ngenkqubo asasazwa.
Coinbase yenza inkqubela ukuba ezilawulwayo izibambiso eqinile
Cryptocurrency exchange Coinbase wamemezela ngoLwesithathu ukuba oko ukwenza imitsi ukufikelela usukelo lwayo ekusebenzeni federally kulawulwa kumthengisi-Umthengisi.
Chief igosa kunye nomongameli yokusebenza Asiff Hirji wabhala kwisithuba blog inkampani ukuba Ingabinani ke inkqubo yokufumana ilayisenisi kumthengisi-Umthengisi. Inkampani iceba ukuba bacele imvume evela U.S. Securities and Exchange Commission (sec) kunye Industry Financial Regulatory Authority (FINRA) ukuba banyuse izibambiso blockchain-based.
Ingxelo Daily Market Kraken for 06.06.2018
$118M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Blockchain News 10 EyoMqungu 201...
Emhlabeni, ocean tankers the si...
Xa Reddit AMA ngoLwesibini, th...
Post Previous:Blockchain News 06.06.2018
Post Next:Blockchain News 08.06.2018
Isilimela 29, 2018 e 10:23 AM
EyoMqungu 17, 2019
EyoMqungu 16, 2019
altcoin altcoins bitcoin bitcoin analysis bitcoin bottom Bitcoin crash bitcoin crash over bitcoin crash over 2018 iindaba bitcoin bitcoin news today Bitcoin price bitcoin price growth bitcoin price news bitcoin technical analysis bitcoin today bitcoin trading block chain BTC btc news btc today cardano crypto cryptocurrency cryptocurrency market cryptocurrency news cryptocurrency trading crypto lark crypto news eos ethereum ethereum analysis ethereum news ethereum price exchange imali investing bitcoin is bitcoin done crashing litecoin neo iindaba portfolio yama- sinh when to buy bitcoin xrp